भ्र’ष्टाचारी प्रमाणित भएपछि कोरियाका पूर्वराष्ट्रपतिको घर ११ बिलियन वनमा लि’लामी गरि बेचियो – Eps Sathi
July 2, 2021 857
दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपतिको घर लि’लामीमा बिक्री गरिएको छ। सन २००८ देखि सन २०१३ सम्म दक्षिण कोरियाको स’र्वोच्च पद राष्ट्रपति भएका लि म्यङ बाक भ्र’ष्टाचार प्रमाणित भइ अहिले पनि जे’ल जिवन विताइरहेका छन। उनको घर लि’लामी गरी करिब ११ बिलियन कोरियन वनमा बिक्री गरिएको हो।
उनको घर खाङनामको नोनह्योन क्षेत्रमा रहेको थियो। उनलाई अदालतले १८.७८ बिलियन वन ज’रिवाना तोकेको थियो तर निर्धारित समयमा उनले उक्त रकम तिर्न नसकेपछी उनको सम्पति रो’क्का राखि लि’लामी प्रकृया अघि बढाईएको थियो। उनको सम्पत्ति कोरिया एसेज म्यानेजमेन्ट कर्पोरेशनले लि’लामी प्रकृयामा बेचेको हो।
लि ले उक्त घर सन १९७८ मा किनेका थिए। उनि ५ बर्ष कोरियाको राष्ट्रपति रहँदा समेत उनि त्यहि घरमा बस्ने गर्दथे। तिन तल्ला रहेको उनको घर ६ सय ७३ बर्गमिटर क्षेत्रफलमा फै’लिएको थियो। यो घर लि’लामीमा किन्नेले १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम ३० दिन भित्र चु’क्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्वराष्ट्रपति लिका व’किलले उनको श्रीमती लि यन अकको पनि आधा हो भनि दा’बी गर्न लागेका थिए। तर सउल केन्द्रिय अ’दालतले उनको सम्पति सन २०१८ मै रो’क्का गरिसकेको थियो। उनलाई सम्पति बिक्रीवितरण गर्न रो’क लगाइएको थियो। गत अक्टोबरमा उनलाई अ’दालतले १७ बर्षको जे’ल स’जाय समेत सुनाईसकेको छ।
सउलको केन्द्रिय जिल्ला अ’दा’लत अफिसले उनको घर गत मार्चमा लिएर पब्लिक अ’क्सनमा बेच्नका लागि कामको कम्पनीलाई दिएको थियो। कोरियाको उच्च अ’दा’लतले तोकेको ज’रिवा’ना रकम तिर्न नसकेपछी उनको घर लि’लामीमा लिएको हो। उनलाई भ्र’ष्टाचा’र गरेको तथा शक्तिको दु’रुपयोग गरेको आ’रोपमा अ’दाल’तले जे’ल तथा नगद ज’रिवा’ना तोकेको थियो।
गत बर्षको जनवरी महिनामा दक्षिण कोरियाको उच्च अ’दालतले उनलाई २० बर्षको जेल तथा १८ बिलियन कोरियन वन ज’रिवाना सुनाएको थियो। सउलमा पार्क ग्युन हेको २ तल्लाको घर रहेको छ। उनको उक्त घरको मुल्याङ्कन ३.१६ बिलियन वन तोकिएको छ। २ सय ५७ बर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उनको निवास सन २००८ मा बनेको थियो। सामसङदोङमा रहेको पहिलाको घर ६.७५ बिलियन वनमा बेचेरे उनले यो घर किनेकी थिइन।
Prevरोकिएको कोरिया रोजगारी प्रकृया सुचारु गर्न पहल सुरु
Nextजीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाड कहिले हुँदैछ? जानिराखौं
कोरियामा बढ्यो तलब, अब महिनाको कति हुन्छ? बुझौं